काठमाडाैँमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने तयारीमा विप्लव नेतृत्वकाे नेकपा
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यही मङ्सिर ८ गते काठमाडौँमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने भएको छ । नेकपाको केही समयअघि बसेको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी राजनीति र कार्यक्रम जनसमुदायसमक्ष लैजान काठमाडौँकेन्द्रित प्रदर्शन र जनसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । जनसभालाई नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ ।
आफ्नो संसदीय कोषको लगानीमा ‘डिपबोरिङ’ निर्माण गर्ने यादवको प्रतिबद्धता
लहान । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले आफ्नो संसदीय कोषको लगानीमा सिरहाको मिर्चैैया नगरपालिकामा डिपबोरिङ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मिर्चैया नगरपालिका–८ मा बडादशैँ, शुभदीपावली तथा छठको अवसरमा आज बिहान आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सिरहा क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहेका यादवले किसानले भोग्दै आएको सिँचाइ समस्या समाधानका लागि डिपबोरिङ निर्माण गर्ने बताए ।
काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी धर्नामा बस्न थालेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको छ । मन्त्रालय परिसर अगाडि आज नेपाल प्रहरीले सुरक्षा घेरा बढाएको छ भने सिंहदरबार प्रवेशमा परिचयपत्र, प्रवेशपत्र वा नागरिकताको जाँचमा कडाइ गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अनौपचारिक रूपमा काम थालनी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालबाटै अनौपचारिक रुपमा आफ्नो काम थालनी गरेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा उपचारार्थ प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै प्रा. डा. अरुण सायमीले रक्षा, गृह र ऊर्जामन्त्रीसँग अस्पतालमै बैठक राखी आफ्नो कामको सुरुवात गरेको बताए ।
मेलम्ची आयोजनाका गाडीहरु फिर्ता ल्याउन मन्त्रीको निर्देशन, क–कसले लगेका थिए ? (लिष्टसहित)
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले अन्यत्र प्रयोग भईरहेको मेलम्ची आयोजनाको गाडीहरु तत्काल फिर्ता ल्याउन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिएकी छन् । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका नाउँमा रहेका विभिन्न गाडीहरु अन्यत्र प्रयोग भईरहेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री मगरले बाहिर प्रयोग भईरहेको गाडी फिर्ता ल्याउन समितिलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।
गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई अस्पतालमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान गृहमन्त्री थापा र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलसँग अस्पतालमै छलफल समेत गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
उपत्यकामा कुन समयमा ट्रिपर सञ्चालन गर्न पाउने, यस्तो छ नयाँ नियम ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म ट्रक तथा टिपर सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठकले चालक अनुमतिपत्र, ब्लूबुक प्रतिलिपी, हालसालै खिचिएको फोटोसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निवेदन दिने चालकलाई बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म ट्रक तथा टिपर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं । यसपटकको तिहारमा विद्युत उपभोग भरपूर गर्न पाइने समाचार आज प्रकाशित घटना र विचार साप्ताहिकमा समाचर छापिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पर्याप्त विद्युत रहेकाले उपयोग बढाउन आग्रह गरेको हो । तीन बर्ष अघिसम्म १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य नेपालीका लागि यसपटक भने पर्याप्त विद्युत उपयोग गर्न प्राधिकरणले नै आग्रह गरेको छ ।